Raha ny filazan'i Gartner dia haharitra hatramin'ny faran'ny taona 2022 | Avy amin'ny mac aho
Ny tsy fahampian'ny semiconductor dia hanakorontana mafy ny rojom-pifandraisana ary hametra ny famokarana karazana fitaovana elektronika maro amin'ny 2021. Ny orinasa dia mampiakatra ny vidin'entana ary ny orinasan-tsolika dia mampiakatra ny vidin'ny fitaovana indray. Ka farafaharatsiny hoy izy hoy izy Kanishka Chauhan, mpandalina mpikaroka lehibe ao Gartner, consulting manerantany.
Ny tsy fahampian'ny puce dia nanomboka tamin'ny gadget, toy ny fitantanana herinaratra. Niitatra tamin'ny fitaovana hafa ny tsy fahampiana ankehitriny, ary misy ny famerana ny fahaiza-manao sy ny tsy fahampian'ny akora. Amin'ny ankabeazan'ny sokajy, ny tsy fahampian'ny fitaovana dia antenaina hahemotra mandra-pahatongan'ny telovolana faharoa amin'ny 2022, raha toa kosa ny faneriterena ny akora ilaina amin'ny famokarana sasany mety hatramin'ny faran'ny fahefatra 2022.
Manoro hevitra ireo mpandalina Gartner mandray dingana efatra hanalefaka ny loza mananontanona:
Manitatra ny fahitana an'ny Tohitohim-pamatsiana.
Fiantohana antoka miaraka amin'ny maodely mifameno
Fanaraha-maso ireo tondro
Diversify ny tobin'ny mpamatsy
Koa satria ny tsy fahampian'ny chips amin'izao fotoana izao dia toe-javatra mavitrika, ilaina ny mahatakatra ny fiovana tsy tapaka. Ny fanarahana ny mari-pamantarana lehibe sy ny vinavina amin'ny fitomboan'ny vola miditra ho an'ny indostria semiconductor dia famantarana mavitrika afaka manampy orinasa fikambanana mba hitazomana hatrany momba io lohahevitra io ary jereo ny fitomboan'ny indostria amin'ny ankapobeny.
Amin'ny ankapobeny, ny tiana hambara amin'ny fanambarana an'ity audit manerantany ity dia ireo orinasa tsy maintsy miasa izy ireo izao mba tsy hilentika ny indostria. Toa tsy vahaolana mora izany, saingy mazava ho azy fa tsy maintsy raisina ny fepetra mba tsy hahatratra ny tsy fahampiana. Ny areti-mandringana dia mety tsy afaka miaraka amin'i Apple fa mety mahavita be dia be izany, simba tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Raha ny filazan'i Gartner dia haharitra hatramin'ny faran'ny 2022 ny tsy fisian'ny chips manerana izao tontolo izao
Will Ferrell sy Paul Rudd dia kintana ao amin'ny The Shrink Next Door, amin'ny Apple TV +